IZenzo 21 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
Genesis Eksodus Levitikus Numeri Duteronomi Yoshuwa ABagwebi Rute 1 Samuweli 2 Samuweli 1 Kumkani 2 Kumkani 1 Kronike 2 Kronike Ezra Nehemiya Estere Yobhi INdumiso IMizekeliso INtshumayeli INgoma yazo iiNgoma Isaya Yeremiya IZililo Hezekile Daniyeli Hoseya Yoweli Amosi Obhadiya Yona Mika Nahum Habhakuki Zefaniya Hagayi Zekariya Malaki Mateyu Marko Luka Yohane IZenzo Roma 1 Korinte 2 Korinte Galati Efese Filipi Kolose 1 Tesalonika 2 Tesalonika 1 Timoti 2 Timoti Tito Filemon Hebhere Yakobi 1 Petros 2 Petros 1 Yohane 2 Yohane 3 Yohane Yuda ISityhilelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
21 Ke kaloku sakuba sahlukene nabo saza sahamba ngolwandle, sahamba ngqo saya eKosi, kodwa ngemini elandelayo saya eRodo, ukusuka apho saya ePatara. 2 Yaye xa sasisifumene isikhephe esasiwelela eFenike, sakhwela saza sanduluka. 3 Emva kokubona isiqithi saseSipro+ sasishiya ngasemva kwicala elingasekhohlo saza saqhubeka sisiya eSiriya,+ yaye safika emhlabeni waseTire, kuba isikhephe sasiza kuwuthula apho umthwalo waso.+ 4 Sabafuna sabafumana abafundi saza sahlala apho iintsuku zasixhenxe. Kodwa ngomoya+ bamxelela ngokuphindaphindiweyo uPawulos ukuba angalubeki unyawo eYerusalem. 5 Ngoko sakuzigqiba iintsuku ezo, sanduluka semka; kodwa bonke, kunye nabafazi nabantwana, basikhapha ukuya kufikelela ngaphandle kwesixeko. Yaye saguqa+ phantsi elunxwemeni sathandaza 6 saza sacela indlela,+ sanyukela esikhepheni kodwa bona babuyela kumakhaya abo. 7 Sandula ke salugqiba uhambo ngolwandle ukusuka eTire saza safika eTolemayi, yaye sababulisa abazalwana sahlala kunye nabo usuku lwalunye. 8 Ngemini elandelayo sanduluka saza safika eKesareya,+ sangena endlwini kaFilipu umvangeli, owayengomnye wabantu abasixhenxe,+ sahlala naye. 9 Lo mntu wayeneentombi ezine, zinyulu, ziprofeta.+ 10 Kodwa ngoxa sasihleli iintsuku eziliqela, kwehla umprofeti othile ogama linguAgabho+ evela kwelakwaYuda, 11 yaye weza kuthi waza wathabatha umbhinqo kaPawulos, wabopha iinyawo nezandla zakhe, wathi: “Ngaloo ndlela umoya oyingcwele uthi, ‘Indoda ongowayo lo mbhinqo amaYuda aya kuyibopha+ ngolu hlobo eYerusalem aze ayinikele+ ezandleni zabantu beentlanga.’” 12 Ke kaloku sakukuva oku, thina nabo baloo ndawo sambongoza ukuba angenyuki aye+ eYerusalem. 13 Wandula ke uPawulos waphendula wathi: “Kutheni nilila+ nje, nindenza buthathaka entliziyweni?+ Hlalani niqinisekile ukuba, ndilungele kungekuphela nje ukubotshwa, kodwa kwanokufa+ eYerusalem ngenxa yegama leNkosi uYesu.” 14 Akunganqandeki, sayekelela sathi: “Makwenzeke ukuthanda+ kukaYehova.” 15 Ke kaloku emva kwezi ntsuku salungiselela uhambo saza sanyuka saya eYerusalem.+ 16 Kodwa kwanabathile kubafundi abavela eKesareya+ bahamba nathi, ukuze basise kuloo mntu sasiza kundwendwela ekhayeni lakhe, uMnason othile waseSipro, omnye wabafundi bangaphambili. 17 Sakufika eYerusalem,+ abazalwana basamkela ngochulumanco.+ 18 Kodwa ngemini elandelayo uPawulos wangena nathi kuYakobi;+ yaye ayekho onke amadoda amakhulu. 19 Wababulisa waza wanikela ngokweenkcukacha ingxelo+ yezinto uThixo azenzileyo phakathi kweentlanga ngobulungiseleli bakhe.+ 20 Emva kokuva oku bamzukisa uThixo, baza bathi kuye: “Uyabona, mzalwana, ukuba kukho amawaka amaninzi kangakanani na amakholwa phakathi kwamaYuda; yaye onke anenzondelelo ngoMthetho.+ 21 Kodwa eve amarhe ngawe okuba ubufundisa onke amaYuda aphakathi kweentlanga ukuwexuka kuMoses,+ uwaxelela ukuba angabalusi+ abantwana bawo nokuba angahambi ngawo amasiko. 22 Kuthiweni na ke? Nakanjani na aza kuva ukuba ufikile. 23 Ngoko ke yenza oku sikuxelela kona: Sinamadoda amane anesibhambathiso kuwo. 24 Bathabathe aba bantu,+ uzihlambulule ngokusesikweni kunye nabo uze uzinyamekele iindleko zabo,+ ukuze zichetywe iintloko zabo.+ Yaye ngoko wonk’ ubani uya kwazi ukuba akukho nto kula marhe awaxelelweyo ngawe, kodwa ukuba uhamba ngokulungeleleneyo, nawe ngokwakho uwugcina uMthetho.+ 25 Wona ke amakholwa aphakathi kweentlanga, siwathumelele, sawanika isigqibo sethu sokuba afanele azigcine koko kubingelelwe kwizithixo+ nasegazini+ nakwinto ekrwitshiweyo+ nakuhenyuzo.”+ 26 Wandula ke uPawulos wawathabatha loo madoda ngemini elandelayo, wazihlambulula ngokusesikweni kunye nawo+ waza wangena etempileni, ukuya kwazisa ngemihla emayizaliseke+ yokuhlanjululwa ngokusesikweni, de kube kunikelwe umnikelo+ wakhe ngamnye kubo.+ 27 Ke kaloku ngasekupheleni kweentsuku ezisixhenxe,+ amaYuda avela eAsiya akumbona etempileni avusa isiphithiphithi kuso sonke isihlwele,+ yaye amsa izandla, 28 edanduluka esithi: “Madoda akwaSirayeli, ncedani! Nanku lo mntu ufundisa wonk’ ubani kuyo yonk’ indawo nxamnye nabantu+ noMthetho nale ndawo yaye, ngokungakumbi, ude wazisa namaGrike etempileni ibe uyenze inqambi le ndawo ingcwele.”+ 29 Kuba ngaphambili babebone uTrofimo+ umEfese esesixekweni kunye naye, kodwa babecinga ukuba uPawulos wayemzise etempileni. 30 Yaye kwabakho isaqunge+ esixekweni siphela, kwaye babaleka bonke abantu; bambamba uPawulos baza bamrhuqela ngaphandle kwetempile.+ Zaza ngoko nangoko iingcango zavalwa. 31 Ngoxa babefuna ukumbulala, kwafika ingxelo kumphathi webutho yokuba kwakusisiphithiphithi+ nje kuyo yonke iYerusalem; 32 yaye kwaoko wathabatha amajoni namagosa omkhosi waza wehla ebaleka ukuya kubo.+ Bakubona umphathi-mkhosi+ namajoni, bayeka ukumbetha uPawulos. 33 Ngoko umphathi-mkhosi wasondela waza wambamba, wanikela umyalelo wokuba abotshwe ngemixokelelwane emibini;+ yaye wabuza ukuba ungubani na nokuthi wenze ntoni na. 34 Kodwa bambi esihlweleni bakhwaza bethetha le, abanye leya.+ Ngoko, engakuqondi ngokuqinisekileyo okwenzekileyo ngenxa yoqhushululu, wayalela ukuba asiwe kwindawo yokuhlala amajoni.+ 35 Kodwa akufika kwizinyuko, kwanyanzeleka ukuba athwalwe ngamajoni ngenxa yogonyamelo lwesihlwele; 36 kuba inkitha yabantu yalandela, idanduluka isithi: “Msuseni!”+ 37 Yaye njengoko wayesele eza kukhokelelwa kwindawo yokuhlala amajoni, uPawulos wathi kumphathi-mkhosi: “Ndivumelekile na ukutsho okuthile kuwe?” Wathi: “Kanti uyasazi na isiGrike? 38 Akunguye na ngokwenene laa mYiputa wathi ngaphambi kwale mihla waxhokonxa isiphendu+ waza wakhokelela ngaphandle amadoda ezinkempe angamawaka amane uwasa entlango?” 39 Wandula ke uPawulos wathi: “Mna, enyanisweni, ndingumYuda,+ waseTarso+ eKilikiya, ummi wesixeko esaziwayo. Ngoko ndiyakubongoza, ndivumele ndithethe kubo abantu.” 40 Emva kokuba emnike imvume, uPawulos, emi kwizinyuko, wawangawangisa+ ngesandla sakhe kubo abantu. Kwakuthi cwaka kakhulu, wathetha nabo ngolwimi lwesiHebhere,+ esithi: